बढ्न थाल्यो विद्युतीय गाडीको आयात, एघार महिनामा पाँच अर्बका गाडी भित्रिए - Arthatantra.com
बढ्न थाल्यो विद्युतीय गाडीको आयात, एघार महिनामा पाँच अर्बका गाडी भित्रिए
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा वृद्धि हुन थालेको छ ।
गत वर्षसम्म न्यून मात्रामा आयात हुने गरेको विद्युतीय गाडीको आयात चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन थालेको हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा आयातमा वृद्धि भएको छ ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनामा १७ सय बढी विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार एक हजार ७०४ विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् ।
वि.सं.२०७९ असार ८ बुधवार १५:४६ मा प्रकाशित
अघिल्लाे फेरि उच्च दरमा बढ्यो आँधीखोला लघुवित्तको सेयर मूल्य, आज कति कित्ता बिक्री भयो ?
पछिल्लाे आइएमई पेबाट उडान टिकटमा सर्वाधिक क्यासब्याक सँगै अतिरिक्त रु. ३०० छुट